ရှန်ဟိုင်းရေနံဓာတုစက်ရုံမီးလောင်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ ၊ Jinshan ခရိုင်တွင် တည်ရှိသော Sinopec ရှန်ဟိုင်း ရေနံဓာတု ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ethylene glycol စက်ရုံအား မီးသတ်သမားများက ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် မီးငြှိမ်းသတ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ရှန်ဟိုင်း ၊ ဇွန် ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ ရေနံဓာတုစက်ရုံလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် စနေနေ့နံနက်အစောပိုင်းက မီးလောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူတစ်ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း ယင်း ကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။ရှန်ဟိုင်းမြို့ Jinshan ခရိုင်တွင် တည်ရှိသော Sinopec Shanghai Petrochemical ကုမ္ပဏီ၏ ဓာတုဗေဒဌာနလက်အောက်ရှိ ethylene glycol စက်ရုံ၌ ဇွန် ၁၈ ရက် နံနက် ၄ နာရီ ၂၈ မိနစ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းမီးလောင်မှုကြောင့် စက်ရုံယာဉ်မောင်းတစ်ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာမူ အသေးစား ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စက်ရုံအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ လေထုအရည်အသွေးမှာ ပုံမှန်အနေအထားသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသော အနီးအနားရှိ မြစ်ချောင်းများတွင်လည်း ရေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပွားခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရကြောင်း နောက်ဆုံးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှု အချက်အလက်များအရ သိရသည်ဟု
ရှန်ဟိုင်း ဂေဟဗေဒ နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်း မြူနီစပယ်ဗျူရိုက ဆိုသည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသောနေရာသို့ မီးသတ်သမားစုစုပေါင်း ၅၆၃ ဦး နှင့် မီးသတ်ကား ၁၁၃ စင်းသည် အလျင်အမြန်သွားရောက်၍ မီးငြှိမ်းသတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် မီးလောင်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အခင်းဖြစ်နေရာအနီးရှိ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Sun က ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသို့ပြောကြားရာတွင် နံနက်စောစောတွင် ပေါက်ကွဲသံကျယ်ကြီးကို ကြားခဲ့ရပြီးနောက် သူ နှင့် သူ့မိသားစုဝင်များသည် ဝေးရာသို့ ကားမောင်းထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စက်ရုံမီးလောင်မှုကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ နှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်လာမည့်အလားအလာကို ၎င်းတို့က စိုးရိမ်သောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း အခြေအနေတည်ငြိမ်သွားသဖြင့် နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ၎င်းတို့ မိသားစုဝင် ၆ ဦးသည် နေအိမ်သို့ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရသည့်အကြောင်းအရင်းကို သိရှိနိုင်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တစ်ခုကို ရှန်ဟိုင်းအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးဗျူရိုက ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
SHANGHAI, June 18 (Xinhua) — One person was killed afterafire broke out atapetrochemical enterprise in China’s Shanghai early on Saturday, the company said.
The fire occurred at 4:28 a.m. at the ethylene glycol plant of the chemical department of Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd., located in the city’s Jinshan District. A driver ofatransport vehicle was found killed and an employee of the company was slightly injured.
The Shanghai Municipal Bureau of Ecology and Environment said the latest monitoring data show that the air quality has almost returned to normal, and no water pollution has been found in the surrounding rivers.
A total of 563 firefighters and rescuers and 113 fire engines rushed to the site, and the fire is under control.
A nearby shop owner, surnamed Sun, told Xinhua that after hearing the explosion in the early morning, he drove his family away because they were worried about the potential fallout and pollution. But the family of six returned home hours after as the situation became stable.
The Shanghai Emergency Management Bureau has set up an investigation team to probe the cause of the fire.
Photo- Aerial photo taken on June 18, 2022 shows firefighters working at the fire site at the ethylene glycol plant of the chemical department of Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd. in Jinshan District, east China’s Shanghai. (Xinhua/Fang Zhe)
ရှန်ဟိုင်း ဒစ္စနေးတောင်း ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်
ရှန်ဟိုင်းတွင် ကူးစက်ရောဂါ မှေးမှိန်လာသဖြင့် ပုံမှန်အခြေအနေ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
ရှန်ဟိုင်းတွင် COVID-19 တစ်ဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေသည့်ကြားမှ ကားတင်ပို့မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်